Wararka - Madadaalada safka dambe, booska baabuurta aduunka
1. Daaqada dhinaca dambe ee madadaalada
Haddii muraayadda dhinaca daaqadda ay tahay bandhig is-dhexgal ah, waxay u isticmaali kartaa sida sawir-gacmeedka oo keliya, oo soo dejiso software-ka dhammaan noocyada madadaalada.
Carruurta, waxay wax ku qori karaan, sawiri karaan oo wax ku baran karaan iyaga oo dhex maraya Windows-yada dhinaceeda, iyo mishiinka wax-barashada ee moobiilka iyo encyclopedia waxa loo isticmaali karaa barashada iyo madadaalada goobta bannaan ee baabuurka.
Dadka qaangaarka ah, madadaalada muraayadda dhinaca daaqada waa ka badan, nidaamka dhamaystiran ee dhawaaqa fiidiyooga, weli waxay leeyihiin shaqada sida ciyaarta, madadaalada safka dambe waa hoolka ciyaarta ee socda.Isla mar ahaantaana, muraayadda dhinaca daaqada waxay ku qalabaysan tahay isdhexgalka labadaba ee madadaalada gudaha iyo dibadda baabuurka.Is dhexgalka gudaha baabuurka waxaa loo isticmaalaa bandhig ahaan, dhaqdhaqaaqa ka baxsan baabuurka waxaa loo isticmaalaa dabin ahaan.
Dariishada dhinaca is dhexgalka leh, iyada oo loo marayo guddi taabasho ah, dhex galka fiidiyooga, gudbinta iyo tignoolajiyada kale ee madow, waxay awood u siin kartaa rakaabka inay la falgalaan muuqaalka ka baxsan daaqadda, qaboojiya muuqaalka quruxda badan ee degdega ah, fahmaan xaaladaha maxalliga ah, duubo safarka xoogaa xoogaa.
2. Bandhig muraayadda Skylight
Faa'iidooyinka saqafka qorraxda, waxaa lagu qalabeyn karaa shaashad weyn, oo leh shaqeyn maqal-muuqaal ah oo muuqaal ah oo muujinta iftiinka cirka, waxay u oggolaan kartaa rakaabku inay u seexdaan dhabarka si ay u daawadaan filimada.
Saqafka cadceedda ee xaalada ayaa awood u siinaya in sawirada lagu dhejiyo saqafka sare ee baabuurka, taas oo ka dhigaysa baabuurka mid tignoolajiyadeed oo keenaya waayo-aragnimo muuqaal leh.Horumarinta darawalnimada darawalnimada, isticmaalayaasha mustaqbalka waxay yeelan doonaan khibrad qani ah oo ku saabsan baabuurka.
Saqafka sare ee qorraxda ee immersive wuxuu soo bandhigayaa madadaalo, iyo sidoo kale awoodda lagu daawado jadwalka, ballamaha jadwalka, bandhigyada goobta gaariga, iyo xitaa dooro muusig ku habboon oo ku saleysan xaaladda shucuureed ee rakaabka.
Soo ifbaxa bandhiga iftiinka cirka waa in qolka danbe laga dhigo shaleemo yar, taasoo kobcinaysa khibrada firaaqada ee rakaabka iyo darawalada muusikada iyo sawirada.Mustaqbalka, waxay suurtogal noqon doontaa in la hirgeliyo is-beddelka gaarka ah, marka loo eego doorashadooda si ay u dejiyaan maqal iyo muuqaal, si ay u daboolaan baahiyaha isticmaalayaasha.
VR kaliya maaha bedelka saxda ah ee waxqabadka aduunka dhabta ah, laakiin sidoo kale wuxuu bixiyaa agabka lagu abuuro fursado aan xadidnayn.
Maaddaama warshadaha VR ay sii wadaan kobaca iyo qaan-gaarka, waxay si tartiib tartiib ah uga soo laaban doontaa fikradda ilaa qalabaynta.Tani waa habka ka beddelma sheeko cusub una beddelo horumar la taaban karo, baahida beenta ah ee dadka ayaa si tartiib tartiib ah u baaba'aysa, baahida dhabta ah ayaa si tartiib tartiib ah u soo baxda.
Bal qiyaas adigoo fadhiya kursiga dambe oo muraayadaha VR madaxa kuugu saaran yahay.Waxaad si dhakhso ah u waayi kartaa naftaada adduun kale, illow inaad ku jirto baabuurka, oo arag adduunka kaa horreeya.Waxa kale oo aad ciyaari kartaa ciyaaraha VR oo ay weheliso dhaqdhaqaaqa baabuurta oo aad dhex geli karto.
Shakespeare's line in A Midsummer Night's Dream: "Waxyaabaha la qiyaasi karo inta badan waa dhab, laakiin hoosta qalinka gabayada, waxay noqon karaan kuwo la taaban karo, walxo."Sidoo kale, iyadoo VR-ga baabuurta ay wali ka fog tahay, waxaa habboon in laga fikiro, sababtoo ah kuwa baabuurta sameeya waxay ku dadaalayaan sidii ay noo dhisi lahaayeen.
Saadaasha Holographic waa tignoolajiyad cajiib ah oo sawirta walxaha farsamada, kuwaas oo mashquulin kara darawalka laakiin madadaalo u ah rakaabka kursiga dambe.
Tusaale ahaan, marka lagu daro habka codka, holographic basle waa la wici karaa, sida bar-cunto fudud ee u dhow, saadaasha hawada, muusiga, iyo qafiifiyaha sidoo kale waxaa la waydiin karaa bandhig, iyo wixii la mid ah.Is dhexgalka dhabta ah ee indhaha qaawan, baabuurka wuxuu ku darayaa saaxiib yar.
Robot-ka holographic wuxuu la sheekeysan karaa oo la falgeli karaa rakaabka, isagoo ku daraya caajisnimada.Saadaasha Holographic runtii waxay ku saabsan tahay muujinta macluumaadka indhahaaga hortooda.Markaad aragto "shaashadda" indhahaaga hortooda, waad ciyaari kartaa oo shaqayn kartaa.Tiknoolajiyada saadaalinta holographic ayaa lagu dari doonaa tignoolajiyada xakamaynta codka, taas oo u oggolaanaysa isdhexgalka in uu ku dhaco jumlad keliya.
5. Miiska shaashadda taabashada leexleex
Iyada oo la faafiyey tignoolajiyada iskeed u madaxbannaan ee mustaqbalka, rakaabku waxay xoreynayaan gacmahooda oo waxay heli doonaan waqti iyo meel dheeraad ah oo ay ku isticmaalaan.Tusaale ahaan, qolka fadhiga ayaa noqon doona guri, xafiis iyo xaalado kale.Sidaa darteed, marka boosku ku salaysan yahay xaalad, walxaha naqshadaynta sida miisaska iyo khaanadaha ayaa lagu dhex dhejin doonaa.
Kani waa gaadhi fikradeed oo uu hal sumad u qaabeeyey, halka safka hore ee kuraasigu uu 180 digrii ku wareegi karaa marka uu iskii u wado, isagoo u jeeda rakaabka dhabarka.Si fudud u furfur miis laablaaban oo iftiin ah oo ku yaala booska danbe.Shaashadda taabashada weyn ee miiska isku laabma waxa loo isticmaali karaa labadaba sidii goob ciyaareed iyo korjooge ahaan.
Labaduba way maaweelin karaan, laakiin sidoo kale waxay ku dari karaan sifooyin wax ku ool ah.
6. Kuraasta Wacan
Wax kasta oo madadaalada danbe ay noqon karto, kuraasida waxa loo qaabeeyey inay ku habboonaato baahida rakaabka.
Qol raaxo leh ayaa loo baahan yahay si wax loo cuno, loo ciyaaro, loo seexdo loona nasto.Madadaalada kursigu waa isku dhafka tignoolajiyada qaarkood, sida VR, waxaa lagu dari karaa khibrada buuxda ee 3D ee ciyaaraha, sida duulimaadka hawada sare.Marka lagu daro tignoolajiyada tijaabada aadanaha, baaritaanka jirka ayaa lagu sameyn karaa gaariga dhexdiisa.Marka lagu daro tignoolajiyada kursiga duugista, u ogolow jirka oo dhan xaalad deggan.
Xitaa waad jiifsan kartaa oo waxaad samayn kartaa adeeg HBS oo gaar ah, oo ay weheliso hawlo madadaalo oo badan, rakaabku waxay helayaan raaxo iyo nasasho.Isla mar ahaantaana, kursigu wuxuu bixin karaa adeeg duugis oo shakhsi ahaaneed iyadoo loo eegayo xaaladda jireed ee rakaabka, wuxuuna sidoo kale kugula talin karaa muusik kala duwan wuxuuna soo bandhigi karaa xeelado cunto sida waafaqsan dharka isticmaalaha.